Vyresniaisiais - Lithouws - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: vyresniaisiais (Lithouws - Burmees)
Tie susitiko su vyresniaisiais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų
ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့် လူအကြီးအကဲတို့သည် စုဝေး၍ တိုင်ပင်ပြီးမှ စစ်သူရဲတို့အား ငွေအများ ကို ပေး၍၊
Jos vyras yra žinomas vartuose, kai sėdi su krašto vyresniaisiais.
သူ၏ခင်ပွန်းသည်လည်း မြို့တံခါးတို့၌ ပြည်သား အသက်ကြီးသူတို့နှင့်ထိုင်၍၊ ထင်ရှားသောသူ ဖြစ်၏။
O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs.
အချင်းယောက်ျားတို့၊ ကိုယ်ခင်ပွန်းကို ချစ်ကြလော့။ ကြမ်းတမ်းစွာမပြုကြနှင့်။
Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje.
အချင်းမိန်းမတို့၊ သခင်ဘုရား၌ လျောက်ပတ်သည်အတိုင်း၊ ကိုယ်ခင်ပွန်း၏ အုပ်စိုးခြင်းကို ဝန်ခံကြ လော့။
vyresnio amžiaus moteris­kaip motinas, o jaunesnes­kaip seseris, laikydamasis visiško skaistumo.
အသက်ကြီးသောမိန်းမတို့ကို အမိကဲ့သို့၎င်း၊ မိန်းမပျိုတို့ကို အလွန်စင်ကြယ်သော အခြင်းအရာနှင့် တကွ၊ နှမကဲ့သို့၎င်း မှတ်၍ကျင့်လော့။
Dievo pavadintas vyriausiuoju Kunigu Melchizedeko būdu.
တရားကိုရိုသေသောသူတို့သည် သတေဖန်ကို သင်္ဂြိုဟ်၍ ပြင်းစွာသောငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းကို ပြုကြ၏။
buvo pasakyta: “Vyresnysis tarnaus jaunesniajam”,
သားအကြီးသည် သားအငယ်၌ ကျွန်ခံရလိမ့်မည်ဟု ထိုမိန်းမအား ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏။
သင်တို့သည် သတိနှင့်စောင့်နေကြလော့။ ယုံကြည်ခြင်း၌ တည်ကြလော့။ ယောက်ျား အစွမ်းသတ္တိ နှင့်တကွ ခွန်အားစုံလင်လျက်နေကြလော့။
Šalia esantys tarė: “Tu keiki vyriausiąjį Dievo kunigą?!”
အနား၌ရပ်နေသောသူတို့ကလည်း၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကိုဆဲသလောဟု မေးလျှင်၊
Tada keturi vyrai atnešė pas Jį paralyžiuotą žmogų.
ထိုအခါ လက်ခြေသေသောသူတယောက်ကို လူလေးယောက်တို့သည်ထမ်း၍ အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ ကြ၏။
Jėzų saugantys vyrai tyčiojosi iš Jo ir mušė.
ယေရှုကို ကိုင်ဆွဲသောသူတို့သည် ကိုယ်တော်ကို ပြက်ယယ်ပြု၍ ရိုက်ပုတ်ကြ၏။
Buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų vyresnysis.
ယုဒလူတို့တွင် အရာရှိဖြစ်သော နိကောဒင်အမည်ရှိသော ဖာရိရှဲတယောက်သည်၊
“Tu nuėjai pas neapipjaustytus vyrus ir su jais valgei!”
သင်သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကို မခံသော လူတို့နှင့် ပေါင်းဘော် ၍ စားသောက်ပါသည်တကားဟု ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ဆိုကြ၏။
တဖန် ပိလတ်မင်းသည် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊
ထိုအခါတမန်တော်တို့နှင့် သင်းအုပ်တို့သည် ထိုအမှုကိုကြည့် ရှုဆင်ခြင်ခြင်းငှါ စည်းဝေးကြ၏။
ယောက်ျားသည် မိန်းမကြောင့်ဖြစ်သည် မဟုတ်။ မိန်းမသည် ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်၏။
sim mostra (Portugees>Hindi)veleni (Engels>Italiaans)beluga (Engels>Tjechisch)圆满结束 (Chinees (Vereenvoudigd)>Maleis)es (Hebreeuws>Bulgaars)suggestivo (Italiaans>Duits)me llamo marcos (Spaans>Engels)wewe mkali ni bwana (Swahili>Engels)정말로 (Koreaans>Tjechisch)synchronise (Frans>Baskisch)m apni photo nahi bhej sakti (Hindi>Engels)hortelano (Catalaans>Spaans)fashion (Duits>Spaans)bryan (Fins>Vietnamees)entwicklungsplanung (Duits>Frans)u want (Engels>Tamil)bergerie (Frans>Russisch)we stay chill (Engels>Italiaans)bancaire (Frans>Hongaars)i am waiting for your call (Engels>Hindi)brackish (Engels>Grieks)needless (Engels>Tagalog)z hd (Duits>Frans)news (Italiaans>Duits)my pus (Frans>Engels)